About Us | Taw Win Nan Htake Htar Travels
တော်ဝင်နန်းထိပ်ထား ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၃ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ယနေ့ထိ ခရီးစဉ်ပေါင်းများစွာကို ပြည်တွင်းရော ပြည်ပအတွက်ပါ စီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ပြည်တွင်း ခရီးစဉ်များကိုလဲ အပါတ်စဉ် အုပ်စုလိုက် ၄၅ ယောက်စီး ကားကြီးများနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ခရီးထွက်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးနေပြီး မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ် အစီအစဉ်တွေပါ ထည့်သွင်းပေးထားလို့ တော်ဝင်နန်းထိပ်ထားနဲ့ ခရီးသွားခဲ့ဖူးသူတိုင်း မမေ့နိုင်စရာလေးတွေကိုလဲ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်။
ပြည်ပ ခရီးစဉ်များအနေနဲ့လဲ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်နှင့် ကိုရီးယား အစရှိတဲ့ နိုင်ငံများရဲ့ သဘာဝအလှအပ၊ သူတို့ရဲ့ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ အစားအသောက်နဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို လေ့လာခွင့်ရအောင် အစဉ်ကြိုးစား စီစဉ်ပေးနေပြီး တော်ဝင်နန်းထိပ်ထားနဲ့ ပြည်ပခရီးသွားများ အားလုံးအတွက် အထူးကောင်းမွန်သော လုံခြုံရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အခြားသော စောင့်ရှောက်မှုများကိုလဲ ထည့်သွင်း စီစဉ်ထားခြင်းကြောင့် မိမိတို့နဲ့ ပြည်ပကို ခြေဆန့် လည်ပါတ်သူတွေ နေ့စဉ်တိုးပွားလျက် ရှိပါတယ်။
အထူးအစီအစဉ် တစ်ရပ်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းစုအဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း၊ မိသားစုအလိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အဖွဲ့လိုက်သော်လည်းကောင်း၊ အစရှိတဲ့ သီးသန့်အဖွဲ့လိုက် ခရီးသွားအစီအစဉ်များနှင့်တစ်ကွ ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံများအတွက်လဲ အံ့သြ ကြည်နူးဖွယ်ရာ အစီအစဉ်လေးတွေကို အခါအားလျော်စွာ စီစဉ်ပေးနေပါတယ်။
တော်ဝင်နန်းထိပ်ထား ခရီးသွားလုပ်ငန်းစုရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ အထက်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများကို နှလုံးသားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးရင်း ခရီးသွားခြင်းဖြင့် ဘဝအမောတွေ ပြေဖျောက်နိုင်ရေး၊ အသစ်အဆန်းတွေ ရှာဖွေနိုင်ရေး စတဲ့ ခရီးသွားခြင်းနဲ့ ခရီးသွားပြည်သူတို့ရဲ့ ဘဝတွေကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Company Reg. no. - 5109 (2012-13)
Tour Lincense - Kha-3302
Testimonials (or) Customers' Feedback
13.4.2018 Taungyi trip was so pleasant and enjoyable. The trip was my very first trip with tour. I am really satisfied with the services. Tour guide Ko Pyoe is very efficient active and helpful. Thank u so much Taw Win Nan Htake Htar.
Trip on (13.4.2018 to 17.4.2018)Loikaw It was reallyanice family trip to Loikaw. Thanks you very much to taw win nan htake htar tour guide ko thant sin and driver ko kyaw thu who drove safely along the trip. I highly recommend this tour and will surely choose again for next trip too.
We hadanice trip to Taung Gyi on 27.4.2018(Bus 1) and recommend you to travel with Taw Win Nan Htake Htar Travel & Tours. Best services among the others.It was worthwhile to travel with and suchawonderful trip with funny games and songs on the bus and luckily we wonalucky draw ticket for one day trip. Wish you have more success in future!!!
(13 to 17/April/2018 ) - Trvaelling to A Long Daw Katha Pha Great and Pleasant trip. It is because of Chei Chei who care the guest and Toe Toe who warmly deal us. Even if there is some weakness , it can cover the Tour Leader's Guest Care , smile. I am recommend to try this.
Nyi Nyi Lynn